भगवान नै क्रुर बनिदिँदा, नाडी छाम्दा शसंकित हुनुपर्ने ! « Janata Samachar
भगवान नै क्रुर बनिदिँदा, नाडी छाम्दा शसंकित हुनुपर्ने !
प्रकाशित मिति : चैत्र २७, २०७५ बुधबार
काठमाडौं । समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका चिकित्सकहरुले सेवा नै बहिष्कार गरेर आन्दोलन थालेको बुधबार छैठौँ दिन पुगेको छ । आन्दोलनले दैनिक हजारौँ बिरामी प्रभावित भएका छन् । आन्दोलनलाई सरकारले वेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । सरकार आफ्ना मागहरुप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरुको साझा संस्था गोदानले आन्दोलनलाई शसक्त पार्दै लगिरहेको देखिन्छ । दुःखी, गरीब, असहाय बिरामीहरु आउने प्रमुख थलो सरकारी अस्पताल भएकाले यो आन्दोलनले निकै प्रभाव पारेको छ । मानिसको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गर्नेगरी थालिएको आन्दोलनलाई न सरकारी पक्षबाट वार्ता प्रयास गरिएको छ न त चिकित्सकहरु मत्थर हुने देखिन्छन् । औषधोपचारकालागि आउने ग्रामीण भेकका जनता यो आन्दोलनले झनै मारमा परेका छन् ।
ग्रामीण भेकमा बस्ने मानिसहरु उपचारकालागि सदरमुकामसम्म पुग्छन् तर त्यहाँका डाक्टर अस्पतालको बरण्डामा घाम तापिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा दिन इन्कार गर्छन् । भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन छ, माथिबाट त्यही सर्कुलर भएको छ ।’ चिकित्सकको आन्दोलनले देशैभरका बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् । सस्तो र सुलभ सेवाका लागि सहज मानिएका सरकारी डाक्टर नै क्रुर बनिदिँदा बिरामीको संवेदनामा समेत असर परेको छ ।
बिरामीले डाक्टरलाई भगवान मान्छन् । भगवानले हातको नाँडी समाउँदा आधा बिरामी सञ्चो भएको महसुस हुन्छ । तर, अहिले तिनै भगवानले नाँडी छाम्दा बिरामी नै सशंकित बन्ने स्थिति पैदा भएको छ । वीर अस्पतालको बाहिर बुधबारको दृष्य अप्रत्यासित थियो । डाक्टरले सामान्य चेकजाँच गर्दै थिए, अस्पतालको ढोका खोलिएको थियो तर जटिल प्रकृतिका बिरामीहरु लखतरान घाम ताप्दै गरेका थिए । उनीहरु भन्दै थिए– ‘डाक्टरले नै हामीलाई धोका दिए, औषधि गर्छौँ नाम लेखाउनुहोस् भने अहिले आएर वास्ता गर्दैनन्, एक बिरामीका आफन्तले भने ।’
ओपीडीको ताला खुल्यो
आन्दोलनरत सरकारी डाक्टरहरुले वीर अस्पतालको ओपीडी कक्षमा लगाएको ताला प्रहरीले बल प्रयोग गरेर खुलाएको छ । प्रहरीले ताला खुलाएपनि डाक्टरहरुले कार्यकक्षमा बिरामीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण भने गरेका छैनन् । डाक्टरहरुले अस्पतालको आँगनमा बिरामी जाँच्न थाले पनि अत्यावश्यक बाहेकका अपरेसनको काम गरेका छैनन् । यसबाट अपरेसनको डेट लिएर भर्ना भएका बिरामीहरुको कहिले अपरेसन हुने भन्ने ठेगान छैन ।
सबै सरकारी डाक्टरहरुलाई केन्द्रमा समायोजन गर्न माग गर्दै सरकारी डाक्टरहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको ६ दिन बितिसकेको छ । डाक्टरहरुको आन्दोलनबाट बिरामीहरुको बिचल्ली भएको छ । सधैंजस्तै बुधबार पनि सरकारी डाक्टरहरु वीर अस्पताल परिसरमा धर्नामा बसेका बेला प्रहरीले ओपीडी कक्ष खुलाएको हो ।
जापानका चिकित्सकको आन्दोलनः
यदाकदा हामीले सुनेको जापानमा पनि सरकारी डाक्टर र सरकारबीच मतभेद भएको थियो । त्यहाँका डाक्टर समेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, आन्दोलन भिन्नै प्रकृत्तिको थियो । उनीहरुले आफूले गर्ने सेवाको दोब्बर काम गरेर सरकारलाई माग पुरा गर्न बाध्य पारेका थिए । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो एका देशको कथा जस्तै बनेको छ ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माडीको अयोध्यापुरीमा रामको जन्मभूमि भन्ने विषय प्रमाणित
साताको पहिलोदिन सुनको भाउ बढ्याे , प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ २ सय रुपैयाँले बढेकाे छ
तीन घण्टामा तीन कोरोना संक्रमितको मृत्यु
बाँके । भेरी अस्पतालमा उपचाररत तीन कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालको
जसपामा दुई धार छुट्टिँदै, सांसदको हिसाब-किताब शुरु
काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा सहभागि हुने या नयाँ गठबन्धन निर्माण गरी अघि बढ्ने भन्ने दोधारमा
जसपामा दुई धार छुट्टिँदै, सांसदको हिसाब-किताब…
काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा सहभागि हुने या नयाँ गठबन्धन निर्माण गरी अघि बढ्ने भन्ने दोधारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)…
आइतवारकाे माैसम : पहाडी भेगमा हावाहुरीसहित…
हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीको अबस्था रहेको महाशाखाको भनाइ छ।
२०७८ वैशाख ५ गते आइतवारको राशिफल
बोली वचनले साथ दिनेछ। आफन्त भेटघाट हुनेछ। धनको कारोबार बढ्नेछ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा एमालेकै वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसमूहले पार्टी पुनर्गठन गरेको…
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग समयमै पूरा हुनेमा दुई…
३ वटा सुरुङहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको सन्दर्भमा नयाँ काम चुनौतिपूर्ण छ ।
तनहुँसुर पर्यटन मेलाको तयारी पूरा, पूर्वराष्ट्रपति…
तनहूँ जिल्लाको नाम तनहूँसुरबाट अप्रभंश भएर रहेको भन्ने किंवदन्ती छ ।
शनिबारको हावाहुरीले त्रिशूलीको निर्माणाधीन पक्की पुल उडायो
भारतमा एकैदिन १५ सय संक्रमितको मृत्यु
सर्वदलीय बैठकबारे डा.भट्टराईको गुनासो, ‘चेइ नभनी कुकुर पनि कसैको घर जाँदैन’
‘बहुमतको सरकारमा हामीले निउ खोज्ने कुरा छैन’